Iifonti ezijikelezayo: ziyintoni, zisebenzisa, ukusetyenziswa kunye neminye imizekelo. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UNerea Morcillo | 14/10/2021 16:17 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Iifonti ezivuyayo zikhona, kwaye kungengenxa yokuba zinoncumo, kodwa ngenxa yokuba imilo yazo isinika imvakalelo evuyayo. Kuyilo lwegraphic, xa sisenza iprojekthi yophawu lwentengiso yohlobo oluthile okanye icandelo eligcina uphawu olungekho sesikweni ngakumbi, sinokukhetha olu hlobo lwefonti. Uyakhumbula xa sangena kwihlabathi leefonti ezibhalwe ngesandla? Kulungile ke, lungela olunye uhambo, kuba ngeli xesha siza kungena kwihlabathi typefaces ejikelezayo.
Iifonti ezijikelezayo, ezibizwa ngokuba ziifonti ukujikeleza, Ziyinxalenye yesitayile se-sans serif kwaye masithi zezinye zezitayile eziyinxalenye yento esiyaziyo njengeentsapho zohlobo lohlobo. Kule posi, siza kuchaza ukuba ziyintoni kwaye yeyiphi imisebenzi abayifezayo nokuba kuyilo lwabo okanye ubuntu babo.
1 Zintoni kwaye zafika njani?
1.1 UMarco Tulio Jerk
2 Uhlobo lochazo olunobuntu obuninzi
3 Iifonti ezijikelezayo kwimidiya yentengiso
3.1 UDunkin 'uDonuts
3.5 Imascot eyaziwayo
4 Iifonti ezingqukuva ezidumileyo
4.1 IHelvetica ijikeleze isibindi
4.2 I-Arial ijikelezwe
5 Iibhanki zeefonti ezaziwa kakhulu
5.1 Iifonti kuGoogle
Zintoni kwaye zafika njani?
Malunga nenkulungwane ye-XNUMX, uyilo olutsha lwamagama obuGothic lwavela e-Itali, nantsi into eyaziwayo rotund gothic. Kwakunokukhula okupheleleyo kunye nophuhliso kuyo yonke inkulungwane yeshumi elinesine kwaye ngeli xesha lafumana igama lochwethezo olujikelezayo. Ifumana igama lomjikelo ngenxa yemilo yoonobumba, kuba zenziwe ziigophe eziphawuliweyo kunye nezangqa ezivulekileyo kakhulu.
Olu hlobo lochwethezo ngaphandle kwamathandabuzo lwalungumxube odumileyo ECarolingia, iifom zazo zazingaphezulu kwe-Renaissance kunye neyakudala. Ixesha elingaphezulu, lasasazeka kumazwe afana neFrance ne Spain (I-Iberia). Kwimibhalo emininzi yembali lo mgama ubizwa ngokuba yiSpanish Gothic, apho imibongo yeMio Cid yaqanjwa khona. Ekugqibeleni, le ndlela yokuchwetheza yamkelwa kangangokuba yaqala ukusetyenziswa kwiincwadana ezahlukeneyo zokufundisa ngexesha lokuzalwa kwakhona.
Olona phawu luchaza ezi fonti, ngaphandle kwethoni enobuhlobo necacileyo, ngokungathandabuzekiyo ngenxa yokuba zinenani elikhulu lezishunqulelo ezivumela ukugcinwa okukhulu kwesithuba phakathi kwabalinganiswa. Esi sithuba safumana igama lika amanqaku e-tironian, Eyasekwa ngomnye wabaqambi abakhulu beenkqubo zexesha elifutshane.
UMarco Tulio Jerk
UMarco wayelikhoboka lesithethi esaziwayo uCicero. Akadumanga ngoku kuphela kodwa nangokuba ngumqambi omkhulu wexesha. Waqulunqa inkqubo yakhe yokubhala emfutshane. Lo mbhalo wawenziwe ngamanqaku angamawaka amahlanu kwaye wamvumela ukuba abhale ngesantya esiphezulu nangokuchaneka. Ngaphambili besikubiza ngokuba ngamanqaku eTironia, kwaye yayikukuba wayengoyena msunguli uphambili.
Olu qulunqo lwaba semthethweni emva kokubhalwa koxwebhu olwenziwe nge-5 kaDisemba, ngo-64 BC, apho uCicero wahlasela uCatilina ngamazwi akhe.
Iifonti ezijikelezileyo, ngaphambi kokuba zibe yile nto siyaziyo namhlanje, kuye kwafuneka ukuba zihambe kuthotho lweefilitha zokuvela kwazo okulandelayo. Uninzi lwezi fonti aziveli kuphela ekubhaleni kweGothic kodwa kuye kwafuneka ziyilelwe rhoqo, ukuze zisebenze ngokwexesha lazo. Emva koko siza kukubonisa ngakumbi ngenkangeleko yakhe yangoku kwaye siza kuthetha ngobuntu bakhe, ukuba iifom zakhe zichaphazela njani ukufunda kwethu.
Uhlobo lochazo olunobuntu obuninzi
Iifonti ezijikelezayo zibonakaliswa ikakhulu ziimilo zazo, kodwa zikwanokuqulatha uphawu olusondeleyo ngenxa yobukho beemilo zazo ezincinci eziphawuliweyo. Abaqulunqi basebenzisa olu hlobo kwiiprojekthi oopopayi kunye nobungcali ezikufutshane nabaphulaphuli ekujoliswe kubo. Abanye abayili bakhetha ukufaka le ndlela kwi Amabali aBantwananjengoko iimilo zazo zibonelela ngethoni yokunxibelelana intsha kwaye imnandi.
Olu hlobo lokuchwetheza lusetyenziswa kwibhokisi ephantsi, kuba ityala elisezantsi linceda ukomeleza ubuntu kunye nokubonakala ngakumbi. Ukusiqonda ngcono esi sitayile sokubhala, sifuna ukuba ucinge ngokungathi ngumntu ohlekisayo okanye ophilayo, apho ukuzonwabisa kunye nobuchule buninzi.
Olunye uqeqesho olusebenzayo luya kuba kukujonga kwimithombo yeendaba zentengiso, ezinje ngeeposta, iimagazini okanye imiqondiso yevenkile esebenzisa olu hlobo lochwethezo. Ukuba inkampani iqhutywa ngethoni yobuhlobo kwaye nokuba ikwimveliso yayo okanye ngendlela enxibelelana ngayo nabaphulaphuli bayo, iya kuba yimpumelelo enkulu. Okulandelayo, siza kukubonisa ngemizekelo yeenkampani ezaziwayo kwihlabathi liphela, apho zikhethe khona olu hlobo lokuchwetheza.
Iifonti ezijikelezayo kwimidiya yentengiso
Iifonti ezijikelezileyo zidlale indima ebaluleke kakhulu kuyilo lwesazisi esidibeneyo. Uninzi lweenkampani ezilandelayo, zinikezelwe ekwenziweni nasekuthengisweni kwedonuts okanye iimveliso ezifanayo. Nangona kunjalo, uya kumangaliswa kukwazi ukuba ikwasetyenziselwa iimveliso zeemoto.
I-Dunkin yi-American franchise kunye nezizwe ngezizwe, ezinikezelwe kwindawo yokutyela nakwicandelo lokubhaka. Abenzi iicoffees kuphela, kodwa eyona nto idume kakhulu ngamadonathi abo adumileyo. Yayisungulwa kwi-1950 eMassachusetts ngusomashishini uWilliam Rosenberg.
Kuyo yonke imbali yayo, ilogo yayitshintsha de kube kufunyenwe iziphumo zokugqibela. Ekuboneni kokuqala sinokubona ukuba eyona nto ibalaseleyo yeyona typography yayo ingqukuva, le mivumbo ayivelisi kuphela imilo ejikelezayo yedonuts, eyona nto iphambili, kodwa nazo zonke izishwankathelo ezizilungiselele ezinye izinto nayo. Ifonti esetyenzisiweyo ibizwa ngokuba Dunkin.
Nangona isenokungabonakali ngathi xa uyijonga kuqala, ilogo yenkampani yezizwe ngezizwe yaseMelika eyenza kwaye ithengise ikofu ikwenziwe ngohlobo olujikelezileyo, okanye ubuncinci umyili uzamile ukubonelela ngomlinganiswa onobuhlobo kuyilo lwayo.
Into enomdla malunga nale logo ayisiyo typography yayo kodwa luphawu lwayo. Vula 1971, ilogo yaqala ukuvelisa iziqhamo ingumbala omdaka apho imermaid edumileyo yayimelwe kodwa ngesifuba esingenanto. Emva kweminyaka emininzi, i-siren yenziwa ngokutsha emva kwezikhalazo ezininzi ezivela kubathengi.
Namhlanje, le mermaid yenzelwe izinto zejometri kunye neemilo ezinikezela ngenkangeleko ethe kratya nangakumbi, kodwa ngaphandle kokususa ithoni yobuhlobo emelwe yinkampani.
Ngaba wakha wacinga ukuba uhlobo lohlobo lomntu onobuhlobo luya kumelwa phakathi / kwindawo ephezulu yemoto brand? Ewe, sele ungalufumana uluvo lokuba kunokwenzeka kwaye luyasebenza.
IVolkswagen luphawu lwemoto olwasekwa ngonyaka ka-1937. Ilogo yeempawu ze ize imelwe ngoonobumba bokuqala bayo ababini uV kunye no-W abadibeneyo benza into enye. Olona phawu lwentengiso ngokungathandabuzekiyo luhlobo lohlobo olusetyenzisiweyo lwelogo kunye nebango.
Uhlobo lokuchwetheza IVAG ijikelezwe, yi-sans-serif kunye nejometri typeface kwaye ayenzelwanga ngaphezulu nangaphantsi kwenkampani uqobo. Okwangoku iyinxalenye yeAdobe kwaye ikwabonakalisiwe kwiibhodi zezibhengezo, kwizibhengezo nakwezinye iilogo. Umyili ukhethe olu hlobo lochwethezo ukusukela iimilo zalo zejiyometri zihamba ngokuhambelana nesimboli.
Inkampani edumileyo iHaribo, luphawu lwaseJamani olunikezelwe ekwenzeni iilekese kunye neegumies. Yasekwa ngo-1920 ilogo imelwe kwibhokisi ende kwaye igama layo liyinxalenye yesifinyezo somsunguli wenkampani: Hans Riegel y Bonn.
Umyili ukhethe uhlobo olujikelezileyo njengoko wayefuna ukunikezela ngethoni eqaqambileyo nenomdla kuhlobo lophawu, kunye nokunikezela ngethoni yokunxibelelana eyonwabisayo kunye neyonwabisayo. Uhlobo lwentengiso lubhalwe kwimvelaphi emhlophe ebonelela ngesiphumo esima-ntathu, oonobumba bakhaliphile kwaye bavela kwiifonti ezahlukeneyo ezinje I-Helvetica ijikeleze iBold, i-Condensed kunye ne-VAG ejikeleziweyo.
Eyona nto imele le logo ngumbala wayo obomvu, umyili ukhethe umbala oqaqambileyo obonisa ukufudumala kunye nemvisiswano. Ukongeza, kuyilo lubalasele ngokuba yenye yezona mibala zibalaseleyo kwaye zinamandla. Ibhrendi ayimelanga kuphela kuyilo lochwethezo lwayo, kodwa ikwachaza nendlela ezimelwe ngayo ezinye izinto. Ithoni evuyayo igcinwa enkosi ekudalweni komntu wesibini: ibhere.
Ibhere elidumileyo likaHaribo liyimascot ehlekisayo kunye neyonwabileyo, ityheli kwaye ibomvu kwaye ayisihambisi kuphela ilogo kodwa ikwagcina imibala yenkampani. Inkampani ayizami nje ukonwabisa abathengi kodwa, ukuba siyabuza phakathi kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo, siyabona ukuba abaphulaphuli bayo baneminyaka eyahlukileyo kakhulu, ubudala babantwana ukusukela kwiminyaka esi-8 nakwishumi elivisayo ukusuka kwi-18/23 iminyaka.
Njengoko sele ubonile, iifonti ezijikelezileyo bezisetyenziswa kuyilo olwahlukeneyo iminyaka. Ukongeza kwimilo yabo, bakwabonelela ngoluhlu oluphezulu lokufundeka olubenza basebenze kakhulu kwiprojekthi nganye engenelela kuyo.
Okulandelayo, siza kukubonisa eminye imizekelo yeefonti ezingqukuva ezidumileyo kwaye ngawaphi amaphepha onokufumana kuwo.
Iifonti ezingqukuva ezidumileyo
Zininzi iifonti ezijikelezayo ezifumaneka kuthi yonke imihla, kodwa abayili begraphic basebenze kwezona zilungileyo iminyaka emininzi. Ezi fonti, njengoko sibonile kwicandelo elidlulileyo, bezikho kwiiprojekthi ezininzi kwaye zisebenzele iimveliso zobungcali.
Ngaphandle kwamathandabuzo zezona zimele kakhulu:
IHelvetica ijikeleze isibindi
Uhlobo lohlobo lwe-Helvetica lwayalelwa ngabaqulunqi abohlukeneyo. Olu hlobo lochwetheza lubonakaliswa ngokuyilwa kwaye lulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla njengezihloko. Iqwalaselwa njenge-serif typeface ejikeleziweyo. Kwiiprojekthi zoyilo, zihlala zimelwe kwiipowusta zentengiso apho izinto ezinje ngokufota kunye nemifanekiso zigcweleyo. Iipowusta zeepowographic ziyilelwe apho i-typography ingumlinganiswa ophambili.
Ukongeza, ukuba ujonga imiqondiso yezinye iivenkile oza kuba nazo kufutshane nawe, eyona nto ikhuselekileyo kukuba typography imelwe kwezinye zazo. Abanye abayili bezazisi bayisebenzisele iimveliso ezinje INestle, iToyota, iinqwelomoya zaseMelika, iPanasonic okanye uphawu lweJeep.
Ngamafutshane, ithathwa njengeyona ndawo imelwe kakhulu yokuyila kwicandelo loyilo.
Sonke siyazi uhlobo oludumileyo lwe-Arial typeface. I-Arial yenye yeefonti ezisetyenzisiweyo kwiminyaka yakutshanje. Yayisungulwa kwi-1982 nguRobin Nicholas kunye noPatricia Saunders. Yenzelwe ngokukodwa umshicileli we-laser, kwaye ngo-1992 iMicrosoft yagqiba ekubeni isebenzise inkqubo yayo yokusebenza, iWindows.
Iqwalaselwa njengohlobo lohlobo olusebenzayo, kuba ngenxa yeefom zayo, kufanelekile ukuba isetyenziswe kwimidiya ebonakalayo nakwimithombo yeendaba yewebhu. Ikwayinxalenye yamacandelo anje ngala: Intengiso, uyilo kunye nokufundwa kweencwadi, izinto zonxibelelwano zangaphakathi nangaphandle, iiposta kunye nezibhengezo, iiMagazini kunye namaphephandaba kunye namatikiti ekonsathi apho iye yasetyenziswa njengophawu lweempawu ezahlukeneyo.
Nangona kunjalo, emva kweminyaka eliqela yokusetyenziswa, uninzi lwabasebenzisi abayisebenzisayo benze ukugxeka okuninzi apho bacinga ukuba ikopi yexabiso eliphantsi yeHelvetica edumileyo. Kodwa inyani kukuba xa sibahlalutya kakuhle, sinokugqiba ukuba bobabini bagcina ukungafani okubahlula ngokwenyama nangokwabo, kuba abalinganiswa babo bahluke ngokupheleleyo.
Ukuba ujonga uhlobo lochwethezo olunoluhlu oluphezulu lwe ukufundeka, kulula kwaye kuyasebenza, le sans serif typeface ilungele iiprojekthi zakho.
Ngokuqinisekileyo ngekhe uyikholelwe, kodwa iBauhaus typeface inezinto ezifanayo nesitayile sohlobo olujikelezileyo. Olu hlobo lochwethezi lwenziwe ngutitshala UHerbert Bayer, kwisikolo esidumileyo. Yenzelwe eJamani kwi1925 kwaye uyilo lwayo ligcina izixhobo zobugcisa ezigcinwe sisikolo kule minyaka idlulileyo.
Uhlobo lochwethezo lwenziwe ngeesimo setyhula kunye nemigca ethe nkqo. Okwangoku, olu hlobo lokuchwetheza belubalasele kakhulu kwiipowusta zentengiso, kwaye kwiminyaka eyadlulayo, lwalusetyenziswa kwiipowusta zopolitiko apho kwenziwa iinzame zokuqinisa umyalezo. Njengoko sele sibonile, kukho iifonti ezigcina iimpawu ezifana neefonti ezingqukuva ngaphandle kokuqwalaselwa zijikeleze.
Kwaye ngoku uya kuzibuza ukuba ungayifumana phi yonke le mithombo sikubize ngegama, ke, hlala ithutyana kunye nathi kwaye siya kuwusombulula loo mbuzo.
Iibhanki zeefonti ezaziwa kakhulu
Okwangoku, enkosi ekudalweni kweebhanki ze-typographic zasimahla kwi-Intanethi, sinazo inani elingenasiphelo lamagama. Iifonti ezijikelezayo ziyafumaneka kwiibhanki ezinje:
Iifonti zikaGoogle sesinye sezona zixhobo zibalulekileyo zaziwayo, kungekuphela ngenxa yokuba iyinxalenye yenkampani kaGoogle, kodwa ngenxa yokuba inikezela ngaphezu kweefonti zasimahla ezingama-600 eziza kusetyenziswa kulonwabo lwakho, nokuba zilungiselelwe wena, ukuthengisa okanye ukusetyenziswa ngobungcali.
Ngamafutshane, yi iqonga lamagama asimahla, Yaziwa ngabaqulunqi abaninzi bemizobo. Ekuqaleni, inkampani igqibe kwelokuba isebenzise oovimba beefonti zewebhu kuphela, kodwa ekuhambeni kwexesha iphinde isetyenziselwe ukuprinta, abaninzi ke bayisebenzisa kuyilo lweekhathalogu.
Imithombo egqame kwezona ziqhelekileyo zihlala: Montserrat, Playplay Display, Merriweather, Roboto, Open Sans, Rubik, Space Mono, Poppins, Arvo kunye Oswald.
Siyakumema ukuba uzame eli qonga kwaye uqale ukuphanda kwaye ufumane okungakumbi ngalo.
Ukuba into oyifunayo kukufumana iintlobo ezininzi zeefonti, nokuba zijikelezile okanye akunjalo, eyona nto intle kukuba ungene kwilizwe laseDafont.
UDafont yiwebhusayithi apho unokufumana iifonti ze Zonke iimilo kunye nazo zonke iintlobo zokusetyenziswa. Sisixhobo esifanelekileyo kwabo bayili bafuna ubuchule kwaye banike utshintsho kwiiprojekthi zabo. Inamaqela alishumi elinambini ophendlo kwaye ikunika ithuba lokujonga kwangaphambili ubuchwephesha bakho kwisicatshulwa esiyintsomi ukufumana iziphumo ngaphambi kweprojekthi yakho.
Kwi-Behance awufumani kuphela iiprojekthi zobugcisa kodwa kunye neefonti ezinokukukhuthaza kwaye zikuncede kwiiprojekthi zakho. Liqonga okanye iwebhusayithi ebonelela ngokwabelana kunye nokupapasha iiprojekthi zakho.
Yintoni ephawula i-Behance kukukhetha kwayo ukubonelela ngeqondo eliphezulu lokwamkelwa kumagcisa. Kwaye kutheni le nto sincomela obu buncwane? Kungenxa yokuba, ukuba uyile uhlobo okanye uyalithanda ilizwe lochwethezo, apha unokufumana amagcisa amaninzi ayila into oyithandayo kunye nomdla kakhulu.
Uninzi lwazo lwenza iiprojekthi kwiifonti kwaye lukwacebisa ukuba zeziphi ezifanelekileyo kwiiprojekthi zakho.
Kwi-Fontspace, sinokufumana malunga neefonti ezingama-8914, ezidweliswe ngaphezulu kwama-3000 amacandelo. Iqwalaselwa njengelinye lamaqonga aneentlobo ezininzi zeefonti. Ukongeza, kuphela kwento enokhetho lokuguqula ubungakanani befonti ehlelwe ngokwamanqanaba, amagama okanye imihla.
Ukuba ujonga iqonga kunye nolona hlobo lubalaseleyo, iFontspace yeyakho.
Ilizwe lokuchwetheza libanzi kakhulu, kwaye mhlawumbi singadinga iminyaka emininzi ukuze sazi i-100% yayo yonke imbali. Ukuba awukafundi inqaku lethu elithetha ngeefonti ezibhalwe ngesandla, siyakumema ukuba wenze njalo ukuze ungene kwimbali kwasekuqaleni.
Ujikelezo lochwethezo sesinye isahluko kolu hambo lude. Ngokuqinisekileyo i-adventure engapheliyo isabhalwa kodwa okwangoku kuyafuneka ukuba uziqhelanise nabo baqale into yanamhlanje ayisiyonxalenye yoyilo kuphela, kodwa ikwayimini yethu yemihla ngemihla ngalo lonke ixesha sifunda okanye sibona uyilo lweengcali zethu.
Sikucebisa ukuba uqhubeke usenza oko ujikelezo lweefonti kwaye uqhubeke nokufunda ngakumbi ngeli sebe loyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ujikelezo lochwethezo
Uyenza njani i-gradient kwi-Illustrator
Imbali yoyilo lwegraphic